ထူးဆန်းသော ​ရွှေကံကူ ​​လေပျံသစ်​​တော်​ မြတ်​စွာဘုရား…. – ရွှေအလင်း
ထူးဆန်းသော ​ရွှေကံကူ ​​လေပျံသစ်​​တော်​ မြတ်​စွာဘုရား….
၁၉၉၅ ခုနှစ် ၊မေလတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း မော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်မြို့နယ် အထက်ချင်းတွင်း သစ်ထုတ်ရေးဒေသ မိုင်းချောင်းအကွက်(၂၄)ရှိတွန်နိမ်ရွာနှင့် မဲဒင်းလေးရွာတို့မှ ၅မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော တောတွင်းတစ်နေရာမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သစ်ပျံတော်သည် ရေကြီးချိန်များတွင် မူလငုတ်ရင်းနေရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလေ့ရှိကြောင်း၎င်းသစ်တုန်းကြီးပေါ်တွင် အဝတ်များလျှော်ဖွတ်မိပါက ဖျားနာခြင်း ဝမ်းလျောခြင်းများဖြစ်ပွားကြောင်း ၊ ၎င်းတုန်းကြီးပေါ်တွင်သားငါးများ ခုတ်စင်းမိပါကရောဂါဘယအမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားခြင်း ဘေးအန္တာရယ်အမျိုးမျိုးကျရောက်ခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရကာ နောက်ဆုံးတွင်အသက်ဆုံးရူံးခြင်းတို့ကိုဒေသခံများမှ သတင်းပို့ပြောပြကြပါတယ်။
၎င်းသစ်ထူးခြားပုံအား မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ သွားရောက်သယ်ယူ၍စစ်ဆေးခဲ့ရာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၉၀)ကျော်ကာလ အင်္ဂလိပ်လက်ထက် BBC (ဘုံဘေဘားမားကုမ္မဏီ) ၏ တံဆိပ်ကောင်းပါရှိပြီးသစ်နံပါတ်မှာ (၉၉၉) ဖြစ်ပါသည်။ အလျား(၂၇)ပေနှင့် လုံးပတ်(၇)ပေ(၂)လက်မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သစ်တော်သည် ဆွေးမြေ့ခြင်း ဟောင်းနွမ်းခြင်းမရှိပဲ လတ်ဆတ်လျက်ရှိပါသည်။
၎င်းထူးဆန်းသော သစ်အပိုင်းအားတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိသောမော်လိုက်မြို့မှ #ဦးမောင်မောင်+ဒေါ်ညွှန့်ရီ (မောနင်းစတား ကဖီး)တို့သည် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် (၂)ဆူနှင့် ရှင်သီဝလိရဟန္တာ(၂)ဆူထုလုပ်ပူဇော်၍ ၉.၉.၁၉၉၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ဆည်ခရိုင်စဉ့်ကိုင်မြို့ ရန်အောင်မြင်ရက်ကွက်ရှိ မိခင်ကြီး အမေကောင်းနှင့်ညီမ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့အေး ( ပညာရေး ဌာန) ၊ ဒေါ်ခင်ခင်ထွေး( ပညာရေးဌာန)နှင့် ၊ ညီ ဦးဘိုဘို ( ဘ /က ပညာရေးဌာန) တို့ထံသို့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူနှင့် ရှင်သီဝလိရဟန္တာ တစ်ဆူတို့ကိုပင့်ဆောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်
၎င်းရုပ်ပွားတော်များတွင် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကိန်းဝပ်နေခြင်း ရုပ်ပွားတော် ထုလုပ်ချိန်တွင် ထူးခြားသော နက္ခတ်ကောင်းများနှင့်ကြုံကြိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် တစ်နေ့တစ်ခြားတန်ခိုးတော်များကြီးမားလာကာ ၉.၉.၁၉၉၉ ရက်နေ့မှစ၍ ” ရွှေကံကူလေပျံသစ်တော်” ဘုရားအဖြစ် ထင်ရှားစွာ ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါသည်။
ဘုရားရှင်သည်အခါအားလျော်စွာ အရပ်မျက်နှာများသို့ပြောင်းကြွတော်မူလေ့ရှိခြင်း ၊ တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ကြွမြန်းတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊မျက်နှာတော် ပြုံးတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊မျက်လုံးတော် ဖွင့်တော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ နှုတ်တော်ဖွင့်တော်မူလေ့ရှိခြင်းကိုယ်နေရာအနှံ့ ရောင်ခြည်တော်ား ကွန့်မြူးတော်မူလေ့ရှိခြင်း၊ပင့်ဆောင်ဖူးမျှော်သူ သာဝကများကို အိမ်မက်ပေးတော်မူလေ့ရှိခြင်းလှူဒါန်းတော်ပန်းအဖူးအငုံ ( သဘာဝပန်း ပလက်စတစ်ပန်း စက္ကူ ပန်း)များ စက္ကန့်ပိုင်း ပွင့်တော်မူစေခြင်း၊
လှူဒါန်းထားသော သောက်တော်ရေများ ဆူစေတော်မူခြင်း၊ ကျောင်းောင်သော့ခပ်ထားရှိရာမှ တန်ခိုးတော်ဖြင့် မှန်ဖွင့်ထွက်ကြွတော်မူခြင်း ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပူဇော်ရာတွင် ပကတိမျက်စိဖြင့် မတွေ့မြင်ရသော အစောက်အရှောက်များ ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိခြင်း ၊ ဘွဲ့တော်သည် အိမ်မက်ဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ၊ ( ၂၀၀၃ ခုနှစ် ၊ မေလ ) ရန်ကုန်မြို့တွင် မကိုဋ်စလွယ်တော်ရေစက်ချလှူဒါန်းချိန်တွင် တစ်ခန်းထဲ ငလျင်လှုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ” ရွှေကံကူလေပျံသစ်တော်” ရုပ်ရှင်တော်မြတ်သည် မန္တလေးတိုင်း ၊စဉ့်ကိုင်မြို့နယ၊် ရန်အောင်မြင်ရက်ကွက်ဘုရားအမကြီး အမေကောင်း၏ နေအိမ်တွင် သီတင်းသုံးစံပယ်တော်မူလျက်ရှိပါသည် ။ ပါရမီဆက် သာဝကများ၏ ပင့်ဆောင် ပူဇော်ရာမြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် မြို့ရွာအနှံ့အပြားသို့ ဒေသစာရီခရီးများ ကြွမြန်းတော်မူလေ့ရှိပါသည်။
credit-ei ei phyu
၁၉၉၅ ခုနှဈ ၊မလေတှငျ စဈကိုငျးတိုငျး မျောလိုကျခရိုငျဖောငျးပွငျမွို့နယျ အထကျခငျြးတှငျး သဈထုတျရေးဒသေ မိုငျးခြောငျးအကှကျ(၂၄)ရှိတှနျနိမျရှာနှငျ့ မဲဒငျးလေးရှာတို့မှ ၅မိုငျခနျ့ကှာဝေးသော တောတှငျးတဈနရောမှ ရရှိခွငျးဖွဈပါသညျ။ သဈပြံတျောသညျ ရကွေီးခြိနျမြားတှငျ မူလငုတျရငျးနရောသို့ ပွနျလညျရောကျရှိလရှေိ့ကွောငျး၎င်းငျးသဈတုနျးကွီးပျေါတှငျ အဝတျမြားလြှျောဖှတျမိပါက ဖြားနာခွငျး ဝမျးလြောခွငျးမြားဖွဈပှားကွောငျး ၊ ၎င်းငျးတုနျးကွီးပျေါတှငျသားငါးမြား ခုတျစငျးမိပါကရောဂါဘယအမြိုးမြိုးဖွဈပှားခွငျး ဘေးအန်တာရယျအမြိုးမြိုးကရြောကျခွငျးမြားနှငျ့ ကွုံတှရေ့ကာ နောကျဆုံးတှငျအသကျဆုံးရူံးခွငျးတို့ကိုဒသေခံမြားမှ သတငျးပို့ပွောပွကွပါတယျ။၎င်းငျးသဈထူးခွားပုံအား မွနျမာ့သဈလုပျငနျးမှ သှားရောကျသယျယူ၍စဈဆေးခဲ့ရာ လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျး(၉၀)ကြျောကာလ အင်ျဂလိပျလကျထကျ BBC (ဘုံဘဘေားမားကုမ်မဏီ) ၏ တံဆိပျကောငျးပါရှိပွီးသဈနံပါတျမှာ (၉၉၉) ဖွဈပါသညျ။ အလြား(၂၇)ပနှေငျ့ လုံးပတျ(၇)ပေ(၂)လကျမရှိကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။ သဈတျောသညျ ဆှေးမွခွေ့ငျး ဟောငျးနှမျးခွငျးမရှိပဲ လတျဆတျလကျြရှိပါသညျ။
၎င်းငျးထူးဆနျးသော သဈအပိုငျးအားတဈဆငျ့လကျခံရရှိသောမျောလိုကျမွို့မှ #ဦးမောငျမောငျ+ဒျေါညှနျ့ရီ (မောနငျးစတား ကဖီး)တို့သညျ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျော (၂)ဆူနှငျ့ ရှငျသီဝလိရဟန်တာ(၂)ဆူထုလုပျပူဇျော၍ ၉.၉.၁၉၉၅ ရကျနတှေ့ငျ မန်တလေးတိုငျး ကြောကျဆညျခရိုငျစဉျ့ကိုငျမွို့ ရနျအောငျမွငျရကျကှကျရှိ မိခငျကွီး အမကေောငျးနှငျ့ညီမ ဒျေါနှဲ့နှဲ့အေး ( ပညာရေး ဌာန) ၊ ဒျေါခငျခငျထှေး( ပညာရေးဌာန)နှငျ့ ၊ ညီ ဦးဘိုဘို ( ဘ /က ပညာရေးဌာန) တို့ထံသို့ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောတဈဆူနှငျ့ ရှငျသီဝလိရဟန်တာ တဈဆူတို့ကိုပငျ့ဆောငျပေးပို့ခဲ့ပါတယျ၎င်းငျးရုပျပှားတျောမြားတှငျ ဗုဒ်ဓဓာတျတျောမြားကိနျးဝပျနခွေငျး ရုပျပှားတျော ထုလုပျခြိနျတှငျ ထူးခွားသော နက်ခတျကောငျးမြားနှငျ့ကွုံကွိုကျခွငျးတို့ကွောငျ့ တဈနတေ့ဈခွားတနျခိုးတျောမြားကွီးမားလာကာ ၉.၉.၁၉၉၉ ရကျနမှေ့စ၍ ” ရှကေံကူလပြေံသဈတျော” ဘုရားအဖွဈ ထငျရှားစှာ ပှငျ့ထှနျးပျေါပေါကျတျောမူလာပါသညျ။
ဘုရားရှငျသညျအခါအားလြျောစှာ အရပျမကျြနှာမြားသို့ပွောငျးကွှတျောမူလရှေိ့ခွငျး ၊ တဈနရောမှတဈနရောသို့ ကွှမွနျးတျောမူလရှေိ့ခွငျး၊မကျြနှာတျော ပွုံးတျောမူလရှေိ့ခွငျး၊မကျြလုံးတျော ဖှငျ့တျောမူလရှေိ့ခွငျး၊ နှုတျတျောဖှငျ့တျောမူလရှေိ့ခွငျးကိုယျနရောအနှံ့ ရောငျခွညျတျောား ကှနျ့မွူးတျောမူလရှေိ့ခွငျး၊ပငျ့ဆောငျဖူးမြှျောသူ သာဝကမြားကို အိမျမကျပေးတျောမူလရှေိ့ခွငျးလှူဒါနျးတျောပနျးအဖူးအငုံ ( သဘာဝပနျး ပလကျစတဈပနျး စက်ကူ ပနျး)မြား စက်ကနျ့ပိုငျး ပှငျ့တျောမူစခွေငျး၊ လှူဒါနျးထားသော သောကျတျောရမြေား ဆူစတေျောမူခွငျး၊ ကြောငျးောငျသော့ခပျထားရှိရာမှ တနျခိုးတျောဖွငျ့ မှနျဖှငျ့ထှကျကွှတျောမူခွငျး ၊ ဓာတျပုံရိုကျကူးပူဇျောရာတှငျ ပကတိမကျြစိဖွငျ့ မတှမွေ့ငျရသော အစောကျအရှောကျမြား ပျေါပေါကျလရှေိ့ခွငျး ၊ ဘှဲ့တျောသညျ အိမျမကျဖွငျ့ပျေါပေါကျလာခွငျး ၊ ( ၂၀၀၃ ခုနှဈ ၊ မလေ ) ရနျကုနျမွို့တှငျ မကိုဋျစလှယျတျောရစေကျခလြှူဒါနျးခြိနျတှငျ တဈခနျးထဲ ငလငျြလှုပျခွငျး တို့ဖွဈပျေါခဲ့ပါသညျ။
ယခုအခါ ” ရှကေံကူလပြေံသဈတျော” ရုပျရှငျတျောမွတျသညျ မန်တလေးတိုငျး ၊စဉျ့ကိုငျမွို့နယ၊ျ ရနျအောငျမွငျရကျကှကျဘုရားအမကွီး အမကေောငျး၏ နအေိမျတှငျ သီတငျးသုံးစံပယျတျောမူလကျြရှိပါသညျ ။ ပါရမီဆကျ သာဝကမြား၏ ပငျ့ဆောငျ ပူဇျောရာမွနျမာနိုငျငံ အနှံ့ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျ မွို့ရှာအနှံ့အပွားသို့ ဒသေစာရီခရီးမြား ကွှမွနျးတျောမူလရှေိ့ပါသညျ။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ ❤️❤️”
သားငယ်ကို ဘ၀ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ချစ်စုဝေ
လူငယ်(၁၃)ဦးကို မယ်ဆိုင်ဂူထဲက ရှာဖွေ ခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါက ဆေးဝါးကုသပေးရန်အတွက်ပါတဲ့ :O
အင်ဒိုနီးရှားမှာ ငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးနောက် ၆ ပေခွဲမြင့်တဲ့ ဆူနာမီရေလှိုင်းများ တက်ရောက်
ရက်စက်လိုက်တာဗျာ… 😥 ဒီလိုတွေလည်း ရှိနေသတဲ့လား…မိုးရွာကြီးထဲမှာ...
“တရားထိုင်ခြင်း၏ အံ့အားသင့်ဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ —- တစ်နေ့လျှင်...